Wararka Caalamka – HormoodNews
11/13/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Ciraaq(HMN) Ugu yaraan dad lagu qiyaasay 168 qof ayaa ku geeriyooday dalalka Ciraaq iyo Iiraan kadib markii uu ku dhuftay dhul gariir aad u xoog badan oo lagu qiyaasay cabirkiisa 7.3, sida ay sheegeen warbaahinta labadaasi dal. Ugu yaraan 164 qof ayaa ku dhintay dalka Iiraan ,sida uu sheegay sarkaal […]
11/08/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Riyadh(HMN) Amiirka Dalka Sucuudiga ee magaciisa la yiraahdo Mohammed bin Salman ayaa waxa uu amray inuu la baabiiyo musuq maasuqa dalkiisa ka jira . Mohammed bin Salman ayaa waxa uu sheegay inuu go’aansadey inuu la dagaalamo oo uu dib u habayn ku sameeyo wadankiisa, waxna ka badelo sharciyada ad adag ee […]
Italy(HMN) in ka badan 2600 oo qof ayaa laga badbaadiyay bada loo yaqaano Mediterranean Sea wiigii iminka na dhaafay kasoo noqonaya bay yidhaadeen dadka bada baadhayey wiigii ugu hawsha badnaa uguna adkaa ee soo mara. Afar iyo Sodon qof ayaa laga helay maydkooda Badda, halka ay 26 qof yihiin hablo dhalin […]
11/05/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Riyadh(HMN) Dawlada Sucuudiga ayaa xidhxidhay 11 Amiir, afar wasiir oo ka tirsan dawlada iyo toban ka mid ahaa wasiiradii hore ka dib markii ay baadhitaan samaysay hay’ad cusub oo magaceeda la yiraahdo ladagaalanka musuq maasuqa oo uu madax ka yahay amiir Mohammed bin Salman. Warka ayaa waxa siidaayey telefishanka uu leeyahay […]
10/19/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Kenya(HMN) Madaxa doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa walaac aad weyn ka muujiyay in ururkooda ay awood u yeelan karaan in ay qabtaan doorasho xor iyo cadaalad ah oo ay soo saaraan natiijo la aqbali karo wiiga fooda inagu soohaya. Komishanka madaxa banaan ee doorashooyinka oo marka la soo gaabiyo loo […]
Dawlada Ruushka Oo Ku Hanjabtay Inay Xakamayn Doonto warbaahinta Maraykanka Ee Ruushka Jooga.
10/09/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Moscow(HMN) Dawlada Ruushka ayaa sheegtay inay xakamayn doonto warbaahinta Maraykanka ee ka hawlgahsa dalkooda haddii aan cadaadiska laga dayn telefishanka RT loo yaqaano ee uu Ruushku leeyahay oo ka hawlgala dalka Maraykanka. Saraakiil ka tirsan dawlada Ruushka ayaa ku eedeeyey in ay Washington ay ku hayso cadaadis aan loo baahnayn […]
Wasaarada Arimaha Gudaha Ee Sucuudiga Oo Xaqiijisay In Lagu Dilay Sadex Askari Weerarkii Jeddah.
10/07/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Jeddah(HMN)Saddex askari oo Sacuudi ah ayaa lagu dilay Jeddah sadex kalena waa lagu dhaawacay ka dib markii weerar uu ku qaaday nin dhalashadiisu tahay Sucuudi qaad maqaaxi ku taala dibada oo u dhaw albaabka laga soo galo salaam Palace. Afhayeen u hadlayay wasaarada arimaha gudaha ee dawlada Sucuudiga ayaa sheegay […]
Tiro Ka Badan 50 Ruux Oo Lagu Dilay Bandhig Faneed Ka Dhacay Magaalada Las Vegas
10/02/2017 by Siciid M Comments are Disabled
Las Vegas (HMN)- In ka badan 50 ruux ayaa lagu dilay, 200 kalena waa ay ku dhaawacmeen, kaddib markii nin hubeysan uu rasaas ooda uga qaaday goob ay dad fara badan ku caweynayeen oo ku taal magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka. Goobtan ayaa waxaa ka socday bandhig faneed masrax […]
Hoobiyeyaal Iyo Madaafiic Lagu Garaacay Garoonka Diyaaradaha Baydhabo
10/01/2017 by Siciid M Comments are Disabled
Baydhabo (HMN)- Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in weerar madaafiic lagu qaaday garoonka diyaaradaha, halkaasoo ay saldhig ku leeyihiin Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM. Sida ay sheegayaan wararka dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha Baydhabo, iyadoo aan la soo sheegin […]
09/30/2017 by Siciid M Comments are Disabled
Muqdisho (HMN)- Madaxweynaha Soomalaiya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu xarigga ka jaro Saldhigga Milateri ee Turkiga ka dhistay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu tababarayo Ciidamada Soomaaliya. Sida ay sheegayaan wararka Madaxweyne Farmaajo iyo Taliyaha Ciidamada Milateriga Turkiga Gen. Halusi Akar oo shalay soo gaaray Muqdisho ayaa la sheegay […]